ကျန်းမာရေး « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်ရတယ်။ ရေက လူတွေရဲ့အသက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်လူတွေက ရေအသောက်နည်းကြတယ်။ ဆာမှ သောက်ကြတယ်။ တကယ်ဆို ဆာမှသောက်တာမဟုတ်ဘဲ အားတာနဲ့သောက်နေရမယ်။ ရေအစား ရေနွေးကြမ်းရော ရသလားမေးရင် မရဘူး။ ကော်ဖီ၊ အချိုရည်၊ ဘီယာနဲ့အစားထိုးရင်ရော ရသလားမေးရင် မရဘူး။ ရေနွေးကြမ်းသောက်မယ်ဆိုရင်လည်း အခါးခြောက်နည်းရမယ်။ သေချာမှတ်ထားပါ…. ရေက လူတွေရဲ့အသက်ပါ။
လူတွေ စိတ်မတိုဘဲနေနိုင်လား? လူဆိုတာ ခံစားချက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ။၊ ငိုမယ်၊ ရယ်မယ်၊ တိုမယ်၊ လွမ်းမယ်၊ ကြောက်မယ်၊ လန့်မယ်။ ပျော်ရင်ရယ်တယ်၊ မပျော်ရင် ငိုတယ်။ စိတ်တိုတဲ့အခါ နှစ်ခွန်းလောက်ဆဲလိုက်ရမှ … ဒါဟာ လူတွေရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ခံစားချက်တစ်မျိုးပဲရှိရင် ဒီလူ မကျန်းမာတော့ဘူး။
ဘုရင့်ကျမ်းစာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားပြီးသားပါ။ “စိတ်တိုရင် အသဲကိုထိတယ်၊ ပျော်ရင် နှလုံးကိုထိတယ်၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရင် အဆုတ်ကိုထိတယ်၊ လွမ်းဆွေးရင် သရက်ရွက်ထိတယ်၊ ကြောက်ရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိတယ်၊ စိတ်ကြောင့်ရောဂါရတယ်”။ တကယ်တမ်းပြောရရင် လူအများက အိုသေ၊ နာသေတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကြောင့်သေကြတယ်။ အကြီးအကဲမလုပ်ရလို့ စိတ်ကြောင့်သေသွားတယ်၊ ဆရာမလုပ်ရလို့ စိတ်ကြောင့်သေသွားတယ်၊ ပိုက်ဆံရှာမရလို့ စိတ်ကြောင့်သေသွားတယ်။ လူအိုတချို့ ကိစ္စသေးသေးမွှားမွှားနဲ့ စိတ်ညစ်၊ စိတ်တိုပြီးသေသွားတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ကျွန်တော်ကြုံဖူးတယ်။
ကမ္ဘာကထုတ်ပြန်တဲ့ မကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှု(၆)မျိုးထဲမှာ – (၁) ဆေးလိပ်သောက်တာ (၂) အရက်သောက်တာပါတယ်။ အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်တာဖြစ်တယ်။ အရက်ကို နည်းနည်းသောက်ရင် ကောင်းကျိုးရှိနိုင်သေးတယ်။ ဥပမာ– နေ့တိုင်းအရက်ဖြူကို တစ်အောင်စသောက်မယ်၊ ဝိုင် အထူးသဖြင့် စပျစ်ဝိုင်နီကို ၂အောင်စသောက်မယ်၊ ဘီယာကို ၂၅ဝဂရမ် ဒါမှမဟုတ် ၅ဝဝဂရမ်လောက် သောက်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံသောက်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေတယ်။ အသဲ၊ ဦးနှောက်၊ နှလုံး စတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
အိမ်မှာက “ရန်ပွဲအသေး နေ့တိုင်းရှိတယ်၊ ရန်ပွဲအကြီး တစ်ရက်ခြားရှိတယ်”ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရေသေအိုင်လိုလည်း မိသားစုအိုင်မဖြစ်စေနဲ့။ အငြင်းမပွား၊ စကားမပြောဘဲ လဝက်လောက်နေကြည့်ပါလား! ပျင်းရိခြောက်သွေ့ပြီး သေသွားနိုင်တယ်။
လင်မယားအချင်းချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့ အချက်(၈)ချက်ကို လုပ်နိုင်ရပါမယ်။ အချင်းချင်းလေးစားမှု၊ အချင်းချင်း ချစ်ခင်မှု၊ အချင်းချင်းယုံကြည်မှု၊ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းမှု၊ အချင်းချင်းနှစ်သိမ့်မှု၊ အချင်းချင်းအားပေးမှု၊ အချင်းချင်း အလျော့ပေးမှု၊ အချင်းချင်း ခွင့်လွှတ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းမှာ အကျင့်စရိုက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲ အသိပေးရပါတယ်။ ထားလိုက်တော့… သူ(သူမ) ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရင် ပြီးတာပါပဲ။
ကျန်းမာဖို့ နေ့တစ်နေ့တာကစရပါတယ်။ နေ့တိုင်းကျန်းမာမှ တစ်သက်ကျန်းမာနိုင်မှာပါ။ “စားနိုင်သောက်နိုင်တိုင်း မကျန်းမာဘူး၊ စားတတ်သောက်တာမှ ကျန်းမာတယ်။ လျှောက်စားလျှောက်သောက်ရင် ပိုဆိုးတယ်”၊ “ဗိုက်နဲ့အစားစားတာ ပြည့်ဝဖို့၊ ပါးစပ်နဲ့အစားစားတာ အရသာခံဖို့၊ ဦးနှောက်နဲ့အစားစာတာ ကျန်းမာဖို့”၊ “မနက်စာ ဘုရင်လိုစားပါ၊ နေ့လယ်စာ မှူးမတ်လိုစားပါ၊ ညစာ သူတောင်းစားလိုစားပါ” ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီစကားတွေကို မှတ်ထားပေးပါ။
ကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးက ၁ ဆိုရင် ကျန်တဲ့အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေး… စတာတွေက သုညဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းရင် ကျန်းမာရေး(၁)နောက်မှာ တခြားအရာ(သုည)တွေ လိုက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ၁ဝဝ, ၁ဝဝဝ, ၁ဝဝဝဝ တွေနဲ့ ဆတိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာတဲ့ ၁ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင် တခြားအရာတွေ နောက်ကလိုက်လာပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
24 comments on “ကျန်းမာရေး”
၁။ ခေါင်းကို လှည့်ပေးခြင်း။
မတ်တတ်ရပ်အနေအထားနဲ့ မျက်စိကို မှေးထား၍ ရင်ကော့ပြီး ဗိုက်ကိုရှပ်ထားပါ။ ဦးခေါင်းကို လက်ယာရစ် ၁၀-ကြိမ် လှည့်ပေးပြီး၊ လက်ဝဲရစ် ၁၀-ကြိမ် လှည့်ပေးပါ။
ဇက်ကြောညောင်းသည့်အခါတိုင်း ထိုနည်းဖြင့် လှည့်၍လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းနည်းဖြင့် ဦးခေါင်းကို အစဉ်အမြဲ လှည့်ပေးလျှင် လည်ပင်းကြွက်သား လည်ပင်းအရိုးအဆစ်ကို သန်မာစေနိုင်မည်။
ထို့ပြင် ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ လည်ဆစ်ရိုး ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း အစရှိသည့် ဝေဒနာတို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကုသနိုင်သည်။
ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ခွါ၍ရပ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခါးစောင်းနှစ်ဖက်တွင် တင်ထား၍ ခါးကို ရှေ့သို့ အနည်းငယ် ကိုင်းညွတ်ကာ လက်ယာရစ်၍ ၁၀-ကြိမ်လှည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် လက်ဝဲရစ်၍ ၁၀-ကြိမ် လှည့်ပေးပါ။
ခါးညောင်းတိုင်း ထိုနည်းဖြင့် လှည့်၍ လေ့ကျင့်ပါ။ ဤကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းကို အစဉ်အမြဲ လေ့ကျင့်ပေးလျှင် ခါးကြွက်သားနှင့် ခါးရိုးဆစ်ကို သန်မာလာစေနိုင်သည်။
နာတာရှည် ခါးအကြောတင်ခြင်း၊ ခါးအရိုးအဆစ် ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း၊ ခါးရိုးဆစ်ကြား ချပ်ပိုင်း ငေါထွက်ခြင်း၊ ရိုမက်တစ် ခါးကိုက်နာ၊ တင်ခံရိုး နာ့ဗ်ကြော ကိုက်ခဲခြင်း စသည်တို့ကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ အကိုက်အခဲသက်သာအောင် ကုသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၃။ ပေါင်ကို လှည့်ပေးခြင်း။
မတ်တတ်ရပ်အနေအထားနဲ့ ပေါင်နှင့်ခြေနှစ်ဖက်ကို စေ့ထားပါ။ ထို့နောက် လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးဆစ်နှစ်ဖက်ပေါ် တင်ထား၍ ခြေတံကို ကွေးပြီး လက်ယာရစ်၍ ၁၀-ကြိမ် လှည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် လက်ဝဲရစ်၍ ၁၀-ကြိမ် လှည့်ပေးပါ။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို အစဉ်အမြဲ လေ့ကျင့်ပေးလျှင် ပေါင်ကြွက်သားကို သန်မာလာစေနိုင်မည်။
ဒူးဆစ်ရောင်နာ၊ ကိုယ်အောက်ပိုင်း သွေးပြန်ကြော ဖောင်းကြွ တွန့်လိမ်ခြင်း၊ တင်ခံရိုး နာ့ဗ်ကြော ကိုက်ခဲခြင်း အစရှိသည့် ဝေဒနာတို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်။ ကုသနိုင်မည် ဖြစ်လေသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မလုပ်စေချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါ သိထားဘို့လိုလို့ အကုန်အစင် ရေးရရင် – ကလေး တယောက်မကဖြစ်ခြင်း၊ Ovarian hyperstimulation syndrome မ-မျိုးဥအိမ် ရောဂါတမျိုးရခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အလေးချိန် နည်းလွန်းတဲ့ကလေး မွေးခြင်း၊ ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် ပါခြင်း။
အသက်(၂၆)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်ကြား အမျိုးသား (၂၉)ဦး၏ သုက်သွေးကို စမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ ယခုသုတေသန ရလဒ်ကို ပညာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်
WiFi အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက သတိပေးလိုက်သည်။ ကွန်ပျူတာနှင့် Laptopများမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် Wirelessဖမ်းယူမှု လှိုင်းများသည် သုက်ကောင်များကို ပျက်စီးစေတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများအနေနှင့် Laptopများကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ သုံးစွဲပါက သုက်ပိုးများကို ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ထောက်ပြခဲ့သည်။
အသက်(၂၆)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်ကြား အမျိုးသား (၂၉)ဦး၏ သုက်သွေးကို စမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ ယခုသုတေသန ရလဒ်ကို ပညာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Wi-Fiလှိုင်းများသည် DNAကို အနည်းဆုံး (၃)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ပျက်စီးထိခိုက်စေပြီး (၄)နာရီမျှ ပေါင်ပေါ်တင်သုံးပါက သုက်ကောင်များ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပေးစေရန် (၂၅)ရာခိုင်နှုန်းမျှထိ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း Fertility and Sterility ဆေးပညာ စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် အမျိုးသား တစ်ဦး၏ မျိုးဆက်ပျံ့ပွားရေး စွမ်းဆောင်မှုကို အကန့်အသတ် ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင် အာဂျင်တီးနားမှ ပူးပေါင်း သုတေသီ အဖွဲ့တစ်ခုသည် ပရော်ဖက်ဆာ ကွန်ရာဒို အဗန်ဒါနို ဦးဆောင်မှုဖြင့် WiFiစနစ်နှင့် သုက်ပိုးများ ထိခိုက်မှုကြား ဆက်နွယ်နေခြင်းကို အဖြေရှာခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ WiFiကို သုံးတဲ့အခါ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်သင့်တာက ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ Laptopသုံးတာမျိုး မလုပ်ဖို့ပါ။ ဒါဟာ သုက်သွေး DNAတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်”ဟု အဗန်ဒါနိုက ရှင်းပြခဲ့သည်။ ယခင် သုတေသန ရလဒ်များအရ ပေါင်ပေါ်တင်သုံးသော Laptopများမှ ထွက်ပေါ်သော အပူသည် အမျိုးသားများ၏ သုက်ပိုးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
အရေးပေါ်တားဆေးကို လွဲမှားစွာအသုံးပြု နေသောကြောင့် အရေးပေါ်လူငယ်များလာ
အရေးပေါ်သုံး ကိုယ်ဝန်တားဆေးများအား ဈေးကွက်အတွင်း ကျယ်ပြန့်စွာရောင်းချလာမှုနှင့်အတူ လူငယ်များ၏ လွဲမှားစွာအသုံးပြုမှုကြောင့် ဆေး ယဉ်ပါးမှုဖြစ်ကာ မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိမှုနှုန်း မြင့်မားလာ သည့်နည်းတူ တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုနှုန်းမှာလည်း မြင့်မားလာသည်ဟု သားဖွား မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းက ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဆိုသည်မှာ မိမိသဘောဖြင့် သောက်သုံးခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များ ပြီး သောက်သုံးသူသည် တားဆေးနှင့် မတည့် ပါကမလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိတတ်သည့် အပြင် ရောဂါအခံရှိပါက အသက်သေဆုံးနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ကြီးမား ကြောင်း၊
တားဆေးအများစုတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိတတ် ပြီး သားသမီးမလိုချင်၍ သောက်သုံးမည်ဆိုပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ကာ သောက် သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပဋိသန္ဓေတားဆေးများကို သားဆက်ခြားလိုသည့် မိခင်လောင်းများ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို ရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါရှိသည့် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးရယူလိုခြင်း မရှိသေးသည့် အမျိုးသမီးများအတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများက ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းဖြစ် သော်လည်း လူငယ်ထုအတွင်း အရေးပေါ်သုံးတားဆေးများအား လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေခြင်းများကြောင့် ဆေးယဉ်ပါးကာ မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရ ရှိခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန် ရရှိလာသည့်အခါ တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းတို့ကြောင့် မသေဆုံးသင့်ဘဲ သေဆုံးရသည့် လူငယ်နှင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အမျိုးသမီး ဦးရေပိုများလာကြောင်းဆိုသည်။
”အရေးပေါ်သုံးဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ်အရေးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှ တစ်ခါတစ်ရံပဲ သုံးလို့ရတယ်ဆို တာကို လူငယ်တွေက နားလည် မှုနည်းနေတယ်။ လူငယ်တွေ တော် တော်များများမသိတဲ့အချက်က ဒီအရေးပေါ်သုံးတားဆေးမှာ Failere rate ဆိုတာရှိတယ်။ သူက ၁ဝခါ သုံးရင် တစ်ခါနှစ်ခါ လောက်မှာ ဆေးက မထိရောက်တတ်ဘူး။ အဲဒီအခါကျရင် မလိုချင်တဲ့ကလေး ရသွားတတ်တယ်။ ဒီဆေးတွေကို ယုံကြည်လို့မရဘူး။ ဒီဆေးတွေ ရှိ နေတာပဲဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လျှောက်လုပ်နေလို့ မရဘူး။ ဆရာ့ဆီကိုလာတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီဆေးတွေသောက်ပေမယ့် ကလေး ရလာ တယ်။ ဆေးရဲ့အညွှန်းမှာကတော့ ရာနှုန်းပြည့် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီး ရေးထားတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒီဆေးတွေက ရာနှုန်း ပြည့် စိတ်မချရဘူး။ နောက်ပြီး တစ်လအတွင်းမှာ ဒီဆေးကို ခဏ ခဏသောက်နေရင်လည်း ဆေး ယဉ်ပါးပြီး တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာ မလိုချင်ဘဲ ကလေးရမှာပဲ။ ဒီဆေး မျိုးက တစ်ခါတစ်ရံ အရမ်းအရေး ပေါ် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ သုံးရတာ။ ပုံမှန်သုံးရင် သေချာပေါက်ဆိုးကျိုး တွေရမှာပဲ။ တချို့လူငယ်တွေကျ တော့လည်း ဒီဆေးတွေ မကြာခဏ သောက်မိလို့ ဆေးယဉ်ပြီး ကိုယ်ဝန် ရလာတဲ့အခါ လူကြီးမိဘတွေ အသိမပေးဘဲ တိတ်တိတ်လေး တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ သေသွားရတာတွေလည်း အများ ကြီးရှိလာတယ်။ အများအားဖြင့် တော့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် တွေပိုများတယ်။ နောက်ပြီး ဒီ ဆေးက ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ရောဂါ အခံရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆို ရုတ်တရက်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ပုံမှန်တားဆေး တွေလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိကြတာပဲလေ” ဟု ၄င်းကထပ်လောင်းပြောသည်။
ထိုဆေးများမှာ တန်ဖိုးနည်းပြီး အလွယ်တကူဝယ်ယူ ရနိုင်သည့်အတွက် လူငယ်အများစုမှ လာရောက် ဝယ်ယူလေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုဆေးမှာ လိင်ဆက် ဆံပြီး ၂၄ နာရီသို့မဟုတ် ၇၂ နာရီအတွင်း သောက်သုံး ပါက ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဟုသာ သိရှိကြပြီး ဆေးယဉ်ပါးမှုနှင့် ဆေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကို ပြောပြလိုသော်လည်း အများစုမှာ လက်ခံနားထောင်လိုခြင်း မရှိကြောင်း ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးထံမှ သိရ သည်။
Plz don’t Ignore this mail
ယောက်ျားများတွင်ရော မိန်းမများတွင်ပါ လိင်စိတ်ကျုးလွန်းသော စိတ်ရှိတက်ကြသည်၊ အချို့ဆိုလျှင် သူတို၏ဖို၊မဆန္ဒမှသောင်းကျန်းလွန်းသဖြင့်အခြားအလုပ်လုပ်စရာမရှိပဲ ဒီကိစ္စနှင့် သာ ကုန်ဆုံးပြီးနေတက်သည်။
အချို့ သောယောက်ျားဆိုလျှင်စူပါမင်းဟု ခေါ်ရလောက်အောင်လိင်စိတ်တွေနှင့် သာလုပ်ရင်း၊ကိုင်းရင်ဖြင့် သာနေ
တက်သည်။သမိုင်းပုံပြင်ကို ပြန်ကြည့် လျှင် ဟာကြူလီသည် တညတည်းနှင့် အမျိုးသမီး(၅၀)နှင့် အိပ်ခဲ့ သည်ဟု
အဆိုရှိသည်၊ နီးရိုကာ လီဂိုးလား စသည် ဘုရင်များသည်လည်ရက်အနည်းငယ်တွင်းအမျိုးသမီးတရာနှင့် အိပ်နိင်
ဤလိုသောယောက်ျားတို့ သည် သာမန်လူသားအကြားတွင်နေလို့ မရအောင်ဖြစ်နေတက်သည်၊အလားတူပင်
အမျိုးသမီးတွေလည်း သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေအောင်ဖြစ်နေတက်သည်။
အချို့ သောယောက်ျားတို့ ၏ လိင်တန်ဆာသည်အစဉ်လိုလို တင်မာနေတက်သည်၊ ဖို၊မ ဆက်ဆံပြီးတာတောင်
သေးငယ်သွားခြင်းမရှိချေ၊ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းမှာ အာရုံကြော(သို့ မဟုတ်)ဆီးလမ်းကြောင်တွင် ရောဂါဖြစ်နေသောကြောင့် 
ဖြစ်သည်၊ ဒီလိုလူမျိုးများကို တဏှာအားကြီးသူတွေဟု မဆိုထိုင်ချေ။အချို့ ကြပြန်တော့နည်းနည်းလေးတွေ့ ရတာနှင့်စိတ်ထဲတွင်များများဆန္ဒဖြစ်သွားတက်သည်၊ဒါမျိုးတွေက လည်း ဘ၀တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတက်သည်။
အလားတူစိတ်ဝေဒနာဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးတွေလည်ရှိသည်။ အချို့ ဆိုလျှင် အရွယ်ရောက်ချိန်မှ အသက်(၇၀)ပြည့် သည်ထိ မည်သည်ယောက်ျားကိုမှ အရှုံးမပေး။ ဘယ်တော့ မှ အလံမလှဲသူဟု ခေါ်တွင်လောက်သည်၊ဤ
သူမျိုးမှာလည်း စိတ်ဝေဒနာကြောင့် ဖြစ်ရသည်။
အချို့ အမျိုးသမီးတွေကျပြန်တော့ယောက်ျားများကိုရေလဲနှင့် ပေါင်းသင်း၏၊တစ်ယောက်သွားလိုက်၊နောက်တစ်ယောက်
ကိုယူလိုက်လုပ်နေတက်သည်၊သိုသော် အချိန်ကျတော့ရုတ်တရက် စိတ်ငြိမ်သွားပြီ တကယ်အိမ်ရှင်မကောင်း
ဘ၀ကိုပြောင်းသွာတက်သူ မျိုးတွေလည်ရှိသည်၊ ဤလို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ သူဘ၀ကိုကျေနပ်မှုရအောင် ပေးနိင်စွမ်း
ရှိသူကို မတွေ့ ရသောကြောင့် ဖြစ်၏။တကယ်ကျေနပ်စရာလူကိုတွေ့ သောအခါ ငြိမ်သွား၏။
အချို့ ကြတော့ရည်စားတွေမှိုလိုပေါက်အောင်ထား၏ ၊ဒါက ရာဂစိတ်ဟုမခေါ်နိင် လူရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်၏။
ဒီလို အမျိုးသမီးများက တကယ်တမ်း သူမနှစ်သက်သူနှင့် တွေ့ သောအခါ သစ္စာရှိသောအိမ်ထောင်ရှင်မများဖြစ်သွား၏။
ဤဓလေ့ မျိုးသည် ယခုခေတ်ကြီးမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်၊ ရှေးရောမခေတ်ကတည်းကအထင်အရှားရှိခဲ့ ၏။
ရောမသူဋ္ဌေးဟူကြွယ်သမီးအချို့ သည် ပြည်တန်ဆာဘ၀ကို ခေတ္တသက်ဆင်းကြသူတွေမနည်းလှချေ၊အချို့ ဆိုလျှင်သူတို့ ကြိုက်သော ယောက်ျားများကို အိမ်တွင်း သိသန့် ထား၏၊ပြီတော သူတို့ သဘောရှိ။ ရှေးခေတ် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲသွား တပ်မတော်သားများက သူတို့ ဇနီးမယားတို့ ကို သံလှောင်အိမ်ဖြင့် သောခတ်ပြီး ထားကြသလို ယောက်ျားများကို လည်း သူတို့ လိုသလိုလှောင်ထားတက်ကြသည်ဟုဆို ပါသည်။
အချို့ ဆိုလျှင် ခြေထောက်တွေဘာတွေညောင်းကုန်သည်.စိတ်ကတော့ မကျေနပ်သေးချေဟုဆိုတက်ကြသည်။ဒီလိုဝေဒနာမျိုး ခံစားနေရသူတွေ ယခုခေတ်တွင်အတော်ပေါပေါများများရှိ၏၊ လူသားတို့ ကို အန္ဒရာယ်ပြုလောက်အောင်
သောင်းကျန်းသဖြင့်သူတို့ လူစားမျိုးကို ဇနီး(သို့ )ယောက်ျားအဖြင့် ရွေးထားဖို့ ကြောက်စရာကောင်းလှပါသည်။
ကျွန်တော်ဟာ ယောင်္ကျားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်နေလို့ ပါ….:P
အလင်နဲ့ ညီလာခံထဲမှာ ဘုရင်က ကာလီဒါသ အမတ်ကိုမေးခွန်ထုတ်ပါတယ်၊ “အမှောင်တကာ အမှောင်ထဲမှာ
အဘယ်အမှောင်က အမှောင်ဆုံးလဲ”ဟု မေးခွန်ထုတ်ပါတယ်….
ပေါ်မှာ တွေဝေယစ်မူသွားပါတယ်..တချိန်ထဲမှာပဲ သမီတော်ကရုတ်တရက်ထပြီ ” ဖခင် အမှောင်တကာအမှောင်
ထဲမှာ ယခုလို ကာမမှောင် အမှောင်ဆုံးပါ”ဟု ပြောလိုက်ပါတယ်……..
ကာလီဒါသအမတ်လည် သဘောပေါက် နားလည်သွာပြီ ညီလာခံထဲမှာ သမီတော်တော်ပြောတဲ့ အတိုင်း”အမှောင်
တကာ အမှောင်ထဲမှာ ကာမမှောင် အမှောင်ဆုံး”ပါဟုလျောက်တင်လိုက်ပါတယ်……
ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း သဘောတော်ကြ၍ ဆုလဒ်များ ချီးမြှင့် လိုက်ပါတယ်………
အဖွား ဇတ်လမ်းများကို မဖက်ချင်ပဲ တအံတသြနဲ့ ဖက်ခဲ့ ရလို့ ပါ………
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ သော ဘာသာတရားကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်…
မိခင်က ဘာမှမပြောပဲ သင်၏ဆရာထံသို့တခေါက်ပြန်၍ သင်ကြာပါလေဟု ပြောပါတယ်….
ဖြစ်နိင်မည် ထိုကြောင့်မင်းရဲ့ ဆရာအားလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ပါဟု အကြံပေးပါတယ်…၊
“မိတ်ဆွေ ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့်ထိန်းပါ” ဆိုသောစာတမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်……..
– သားဥအရေအိတ်များ ( Polycysitic Ovarian Syndrome)
– သားဥအလုံးများ( Ovarian mass , cyst)
– ကျားဟော်မုန်းထုတ်သော သားဥအလုံးများ
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော သားဥအလုံး ( Pregnancy Lactomas)
– မွေးရာပါအကျိတ် ( CAH)
– ကျားဟော်မုန်း လွဲကဲစွာထုတ်ခြင်း ( Cushing’s syndrome)
– Androgenic Progestrones
– ကိုယ်အလေးချိန်များပြီး ၀ နေတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ခြင်း
– အမွှေးအမှင်တွေကို ဆေးဆိုးခြင်း ဖယောင်းလိမ်း၍ နှုတ်ခြင်း လျှပ်စစ်ဓါတ် သုံးခြင်း နဲ့ လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ် ။
– Non-androgenic progestrones ခြောက်လကနေ ၁၈ လအထိ သောက်ဖို့လိုပါတယ် ။
– ကျားဟော်မုန်း ဆန့်ကျင်သောဆေးများ ( Anti-androgen ) ဥပမာ Cyproterone acetate (CPA)
– CPA နှင့် မဟော်မုန်းပေါင်းစပ်ဆေး ( CPA + Ethinyl estradiol ) များ
– Sprionolactone စတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။
မေတို့ သိသင့်သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး
ပျိုမေတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးက အရေးပါပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ကောင်းမွန်နေမှသာ ခန္ဓာကိုယ်က သန့်စင်ပြီး ပိုးမွှားတွေ ကင်းဝေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သင့်တဲ့ အချက် နှစ်ချက် ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက လူတွေနဲ့ ပေါင်းဖော်ဆက်ဆံနေရတဲ့ အချိန် လူကြားထဲမှာ သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိနေစေဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးက အရေးကြီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့ ပိုးမွှားတွေကင်းစင်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး လုပ်သင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့ ပိုးမွှားတွေ ကင်းစင်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပျိုမေတို့ သိစေဖို့ အကြံဥာဏ်တချို့ ပေးလိုပါတယ်။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ကောင်းကောင်း ဂရုစိုက်ပေးတာက နာမကျန်းမှု မြောက်မြားစွာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွားတိုက်တာက ခံတွင်းအနံ့ ဆိုးစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကင်းစေပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကင်းဝေးသွားတဲ့အခါ သွားဖုံးရောင်ရမ်းမှုကနေ သွားပိုးစားတာလို သွားနဲ့ ခံတွင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
– တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် သွားတိုက်ပါ။ နံနက်အိပ်ရာထ၊ ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ တစ်ကြိမ်နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်မှာ တစ်ကြိမ် သွားတိုက်ပေးပါ။
– ညဘက်မှာ သွားကြားပွတ်ကြိုးသုံးပြီး သွားကြားထဲက စားကြွင်းစားကျန်တွေကို ကင်းစင်သွားအောင် ဖယ်ထုတ်ပါ။ သွားကြားပွတ်ကြိုးသုံးတာက သွားတွေကြားမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက သွေးထဲကို ရောက်ရှိသွားရင် နှလုံးရောဂါကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားကြားပွက်ကြိုးသုံးတာက လူ့ဘ၀သက်တမ်းကို ရှည်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကင်းဝေးစေနိုင်လို့ပါ။
– အစာစားပြီးတိုင်း ရေနဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ ခံတွင်းထဲမှာ ကပ်ညိကျန်ခဲ့နိုင်တဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ အထိ နုပျိုလှပ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့ မျက်နှာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မျက်နှာ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
– မျက်နှာကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် သန့်စင်ပါ။ နံနက်အိပ်ရာထ တစ်ကြိမ်ကို အပျော့စား မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ ဆေးကြောပေးရုံနဲ့ အဆင်ပြေပေမယ့် တစ်နေကုန် မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာကို ပြန်လည် သန့်စင်ရာမှာတော့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် (Cleansing Cream) လိမ်းပြီး စက်ဝိုင်းပုံအတိုင်း ပွက်တိုက်ကာ နူးညံ့တဲ့ ဂွမ်းစနဲ့ သုတ်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။
– မျက်လုံး မျက်တောင်တွေကို အလှပြင်တတ်သူဖြစ်ရင် မျက်လုံးနဲ့ မျက်တောင်တွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေး၊ အိုင်းလိုင်နာရည်၊ အိုင်းရှဲဒိုး စတာတွေကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတဲ့အထိ သန့်စင်ဆေးကြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်က အရေးပြားက နူးညံ့တာကြောင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်တိက်သန့်စင်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ သွားမတိုက်ဘဲ၊ မျက်နှာမသစ်ဘဲ အိပ်ပစ်လိုက်တာမျိုးကို လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းရေး နည်းလမ်းတွေကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
– နေ့စဉ် ရေချိုးပါ။ တကယ်လို့ သင်က ချွေးထွက်များသူဖြစ်ရင် နံနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် ရေချိုးပါ။ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ဆပ်ပြာမတိုက်ခင် ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကို ကြေးချွတ် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ အရင် ကြေးမချွတ်ဘဲ ဆပ်ပြာတိုက်လိုက်ပါက ဆပ်ပြာအဆီနဲ့ ကြေးတို့ ရောသွားပြီး ကြေးကျွတ်ဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို သပွတ်အူ ဒါမှမဟုတ် ကြေးချွတ်ဘရပ်ရှ် (စူပါမားကတ်တွေမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်) နဲ့ အရင်ဆုံး ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ။ အရေးပြားပေါ်က ကြေးတွေ၊ ဖုန်တွေအပြင် ဆဲလ်သေတွေပါ ကွာကျသွားကာ အရေပြားကို ချောမွေ့သန့်စင်တောက်ပြောင် လှပစေပါတယ်။
– အားကစားလုပ်ပြီးချိန်မှာနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်တွေမှာ ရေချိုးပေးပါ။
– ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ ခြေဖ၀ါး၊ တံကောက်ကွေး စတဲ့ ချွေးထွက်များပြီး အနံဆိုးထွက်တတ်တဲ့ နေရာတွေကို ဆပ်ပြာနဲ့ ရေသုံးပြီး သန့်စင်အောင် ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးပါ။
– ရေချိုးပြီး စိုနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တဘက်နဲ့ သုတ်ပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေကို အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ် လိမ်းပေးပါ။
– ချိုင်းကို ချွေးနံထိန်းတောင့် ဒါမှမဟုတ် ချွေးထွက်နည်းစေတဲ့ ဆေးကို လိမ်းပေးပါ။
– ဖြစ်နိုင်ရင် ချွေးစုပ်နိုင်တဲ့ ချည်သားဝတ်စုံတွေကို ၀တ်ဆင်ပေးပါ။
– တစ်ရက်ခြားတစ်ကြိမ် ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
– ဦးခေါင်းမှာ သန်းနဲ့ ဗောက်တို့ ကင်းဝေးစေဖို့ အထူးဂရုစိုက်ပါ။
မိန်းမကိုယ်သန့်ရှင်းရေးဟာ မိန်းကလေးတိုင်း သိသင့်ပါတယ်။ ရေချိုးတာအပြင် ရာသီလာစဉ် အတောအတွင်းမှာ မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ရေးအတွက် ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
– အိမ်သာသွားပြီးတဲ့အခါတိုင်း ဆေးကြောသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ အဲဒီအခါ အရှေ့ဘက်ကနေ အနောက်ဘက်ဆီသို့ သုတ်ပေးပါ။ စအိုတစ်ဝိုက်က မစင်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ မိန်းမကိုယ်ထဲကို မ၀င်စေဖို့ ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် တစ်သျှူးကိုသုံးပြီး ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
– အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်ဆင်တဲ့အခါ ချည်သားဘောင်းဘီကို ရွေးချယ် ၀တ်ဆင်ပါ။
– ညဘက်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်ကို ၀တ်မထားသင့်ပါ။ နိုင်လွန်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ဘယ်တော့မှ မ၀တ်သင့်ပါ။ ချွေးထွက်တဲ့အခါ ချွေးနဲ့ အစိုဓာတ်ကို စုတ်ယူနိုင်စွမ်းအား နည်းတာကြောင့် အနံဆိုးထွက်တာ၊ အပူလောင်တာနဲ့ အရေပြားကျန်းမာရေး ထိခိုက်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
– မိန်းမကိုယ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ အပေါ်ယံကိုပဲ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ မိန်းမကိုယ် အတွင်းပိုင်းထဲကို ဆေးကြောပေးဖို့ မလိုအပ်ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှာ သဘာဝအတိုင်း ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှားတွေရဲ့ ဟန်ချက်ညီမှုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– မိန်းမကိုယ်က စိုစွက်နေရင် ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုကို များစေပြီး အနံ့ဆိုး ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းမကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့ သန့်စင်နေအောင် ထားပေးသင့်ပါတယ်။
– ဆီးသွားပြီးတိုင်း မိန်းမကိုယ်ကို ရေနဲ့ ဆေးပြီး တစ်သျှူးနဲ့ သုတ်ပေးပါ။
– ရာသီလာစဉ် အတောအတွင်းမှာ မိန်းကလေးအများစုက ရေမချိုးဘဲ၊ ခေါင်းမလျှော်ဘဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက မလုပ်သင့်တဲ့ အယူအဆအမှား ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီလာစဉ် အတောအတွင်းမှာ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားပြီး ပိုမို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
– ရာသီလာစဉ် အတောအတွင်းမှာ လစဉ် အမျိုးသမီးသုံး ဂွမ်းထုပ်ကို သုံးပါက တစ်နေ့ကြာမှ တစ်ခုပဲ လဲတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ တကယ်လို့ ရာသီသွေးဆင်းတာ များသူဖြစ်ရင် အချိန်သုံးနာရီ ကြာတိုင်း အသစ် လဲလှယ်ကာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
– မိန်းမကိုယ် အတွင်းပိုင်းကို အလွန်အမင်း သန့်စင်ဆေးကြောတာ၊ ရနံပြင်းလွန်းတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ အမြှပ်ထတဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာတွေ သုံးတာ ၊ စိတ်ဖိစိမှု များလွန်းတာနဲ့ sex partner အများကြီးရှိတာ စတဲ့ အချက်တွေကလည်း မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်က ပိုးမွှားတွေကို ဟန်ချက်မညီတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကို အထူးရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး သန့်ရှင်းလှပနေမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှတရားက ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ ခြေထောက် သန့်ရှင်းရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
– ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်ကို ကြေးချွတ် သန့်စင်ပေးပါ။ ခြေထောက်ကို ဆပ်ပြာတိုက်ကာ သန့်စင်ပေးပါ။
– ခြေချောင်းတွေကြားပါမကျန် သန့်စင်ပြီး သေချာပြောင်အောင် သုတ်ပါ။
– ခြေဆီအထွက်များရင် ခြေထောက်အနံ့ နံတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက် အနံဆိုးကင်းအောင် ဆားခါး (Epsom Salt) ထည့်ထားတဲ့ ရေထဲမှာ ခြေထောက်ကို စိမ်ပေးပါ။ နာရီဝတ်ကြာမှ ခြေထောက်ကို သုတ်ပြီး လိုးရှင်း လိမ်းပေးပါ။
– ရှူးဖိနပ်လို ထိပ်ပိတ်ဖိနပ်တွေ စီးတာကြောင့် ရှူးဖိနပ်ရော ခြေထောက်အနံ့ပါ နံတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှူးဖိနပ်ကို တစ်ရက်စီးပြီးတိုင်း နောက်တစ်ရက်မှာ ခြောက်သွေ့အောင် လှန်းထားပေးပါ။ နေ့စဉ်စီးပါက ခြေထောက်အနံ့ဆိုး ထွက်အောင် ပိုမို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျိုမေတိုင်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ရောဂါကင်းကြပါစေ။
ယောက်ျား-အင်္ဂါ အတိုင်းအတာကို လက်ဝါးက ပြနေသည်
ယောက်ျားတွေရဲ့လက်မှာ လက်ညှိုးဟာ လက်သူကြွယ်ထက် တိုနေရင် သူ့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါက ရှည်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား သုတေသီတွေက Asian Journal of Andrology မှာ ရေးလိုက်ပါတယ်။
Incheon မှာရှိတဲ့ Gachon University Gil Hospital ဆေးရုံ၊ ဆီးလမ်းအထူးကုဌာနက Tae Beom Kim ကနေ ယောက်ျား ၁၄၄ ယောက်ကို မေ့ဆေးပေးပြီး လိင်အင်္ဂါအရှည်ကို တိုင်းတာကြည့်ပြီးမှ စမ်းသပ်ပြီးပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ခံသူတွေရဲ့ ညာဘက်လက်ကိုသာ သုံးပါတယ်။ အရင်က စမ်းသပ်မှုတွေအရ ညာလက်ဟာ Testosterone ခေါ်တဲ့ ကျား-ဟော်မုန်းကို တုံ့ပြန်တာမှာ ပိုသိသာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ digit ratio လက်ချောင်း-အချိုး နည်းသူတွေဟာ လိင်အင်္ဂါ ပိုရှည်ပါသတဲ့။
Friday, 17 June 2011 18:55
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၄)
January 03, 2011 5:40 PM
AIDS နဲ့ ပါတ်သက်လို့ သိချင်တာပါ။ ဖို-မ ဆက်ဆံရာမှာ သုတ်နဲ့ သွေးက ကူးတာတော့ သိပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မရှင်းတာက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ အဲဒါ မရှင်းဘူး။ (၁) Oral Sex လုပ်ရာက ဘယ်လို ကူးတယ်။ (၂) Condom မသုံးရာက ဘယ်လိုကူးတယ်။ (၃) ဖို-မ ဆက်ဆံရင်းနဲ့ မရဲ့အရည်က Condom သုံးထားပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဆီးစပ်ကို လာပေတဲ့အခါမျိုးမှာရော ကူးတတ်ပါလား။ (၄) Condom သုံးရင်းနဲ့ လိင်တံက ရှည်နေလို့ Condom တဝက်ဘဲ ကာမိတဲ့အတွက် Safe ဖြစ်ပါ့မလားဆရာ။ (၅) Condom က မပေါက်မပြဲပါဘူး။ သုံးတာလဲ Dulux ပါ။ အဲဒါ ကရော စိတ်ချရပါသလား။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ထုံးစံ လိင်အင်္ဂါ-လိင်လမ်းကြောင်းတွေကိုသာမက Oral ပါးစပ် နဲ့ Anal စအိုတွေကိုပါ အသုံးပြုလာ ကြတယ်။ လိင်ဆက်ဆံဖက် တယောက်ယောက်မှာ HIV ပိုးရှိနေရင် ပိုးတွေဟာ အဖေါ်ရဲ့(ဗဂျိုင်းနား)၊ လိင်တံ၊ စအို၊ ပါးစပ် နဲ့ မျက်စိတွေကို ဖုံးထားတဲ့ Mucous membranes အဖုံးလွှာပါးတွေကနေ ဝင်နိုင်သလို Skin ရိုးရိုး အရေပြားမှာ အပေါက်-အပြဲရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးထိုးအပ် စတာနဲ့ ထိုးဖေါက်ရင် ကူးဝင်စေနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ပိုးရှိ မိခင်ကနေ သူ့ကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံး၊ မွေးဖွါးနေတုံးနဲ့ နို့တိုက်တုံးမှာလဲ ကူးစေတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ ရှိရှိ-မရှိရှိ HIV ပိုးရှိနေသူတိုင်းရဲ့ သွေးထဲအပြင် Sexual secretions ခေါ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ ကျား-မ လိင်အင်္ဂါတွေကနေ ထွက်တဲ့အရည် မှန်သမျှထဲမှာလဲ ပိုးပါနေတယ်။ ပိုးကောင်ရေ အနည်း-အများတော့ ကွဲပြားတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ လိင်တကြိမ် ဆက်ဆံတိုင်း (မ-ကျား) ဆက်ဆံရာကနေ ကူးနိုင်တာ ဝ့ဝ၄%၊ (ကျား-မ) ဆက်ဆံရာကနေ ကူးနိုင်တာ ဝ့ဝ၈% ရှိတယ်။ စအိုသုံးနည်းဆိုရင် ၁့၇% ရှိတယ်။ မချမ်းသာတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒိထက် ၅-၁ဝ ဆ ပိုပါတယ်။
ဆက်ဆံမိလို့ ဒါမှမဟုတ် သံသယရှိရင် ဆက်ဆံမှုပြုပြီးရင် ၆ ပါတ် အတွင်း HIV antibody test သွေးစစ်ပါ။ အမှန်ကတော့ ၆ လ ကြာမှ သေခြာပေါက် Positive ရှိတာ သိတာပါ။ HIV ပိုး ဝင်-မဝင် စမ်းတာကို ELISA နည်းခေါ်တယ်။ သွေးဖြစ်ဖြစ် တံတွေးဖြစ်ဖြစ် စစ်တာဟာ မိနစ် ၂ဝ သာကြာပါတယ်။ ELISA စမ်းလို့ HIV antibody တွေ့ရင် Western blot test နဲ့ သေခြာအောင်လုပ်တယ်။ Rapid antibody tests အမြန် စမ်းနည်းတွေ ပေါ်နေပါပြီ။
ဒီကြားထဲမှာ ပိုးအဝင်ခံရပြီးသူ ၅ဝ% က တုပ်ကွေးနဲ့ တူတာတွေ ခံစားလာရတာ၊ ၁ လ ၂ လ ကြာနိုင်တယ်။ Stage of primary HIV infection အစဦးကူးတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ပူ၊ အဆစ်တွေနာ၊ လည်ချောင်းနာ၊ လည်ပင်းအကြိတ်တွေ ရောင်-နာ နိုင်တယ်။ တချို့မှာ ဘာလို့ အဲလိုမဖြစ်သလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါ။ အဲလိုလက္ခဏာ ခံစားရသူတွေ နောင်မှာ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာကိုလဲ အတတ် မပြောနိုင်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာ Antibody testing လုပ်တော့လဲ တွေ့ခြင်မှ တွေ့မယ်။ Viral load test ဗိုင်းရပ်စ် အနည်း-အများဆိုတာ စစ်ရမယ်။ Billions of HIV particles (copies) သန်းထောင်နဲ့ချီလို့ ပွါးလာနေပါလိမ့်မယ်။ တပြိုင်နက်ထဲမှာ CD4 cells တွေ ကျလာနေမယ်။
(ဗိုင်းရပ်စ်) တွေက သွေးထဲမှာသာမက တကိုယ်လုံးမှာ ရှိနေမယ်။ အထူးသဖြင့် Lymph nodes တက်စေ့၊ Brain ဦးနှောက် နဲ့ Genital secretions လိင်လမ်း-အရည်တွေထဲမှာပါ။ Vagina အမျိုးသမီး (ဗဂျိုင်းနား)၊ Rectum ကျား-မ စအို၊ Urethra ဆီးသွား-ပြွန်တွေကို ဖုံးထားတဲ့ အလွှာပါးတွေကနေ ဝင်လာစေနိုင်တယ်။ ဘယ်တော့ AIDS ဖြစ်မလဲ မပြောနိုင်ပါ။ တချို့ ၁ နှစ်၊ တချို့ အနှစ် ၂ဝ ကြာတယ်။ ပျမ်းမျှ ၈-၁ဝ နှစ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
လိင်မဆက်ဆံမီနဲ့ ဆက်ဆံနေတုံး ယောက်ျားကနေ Semen ခေါ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါအရည်၊ အမျိုးသမီး ဗဂျိုင်းနားကလဲ Vaginal fluids အရည်တွေ ထွက်မယ်။ ပိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားဟာ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးဘဲ လိင်ဆက်ဆံရင် သူ့အရည်ထဲက ပိုးဟာ Vagina (ဗဂျိုင်းနား)၊ Cervix သားအိမ်အဝ နဲ့ Uterus သားအိမ်တွေရဲ့ အဖုံးလွှာတွေ ကနေတဆင့် ဝင်သွားစေနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးမှာ အဲဒီ အနားတဝှိုက်မယ် အနာအဆာ-ရှတာ တခုခု ရှိနေရင် ကူးစေနိုင်တယ်။ ဝင်လာတာနဲ့ သွေးထဲ ရောက်သွားပြီ။ အနာအဆာ-ရှတာတွေက မျက်စိနဲ့ မြင်ကောင်းမှ မြင်ရမယ်။ အမျိုးသမီး ကိုယ်တိုင်ကလဲ သိခြင်မှ သိပါလိမ့်မယ်။
အတူတူဘဲ အမျိုးသမီးမှာ HIV ရှိနေပြီး၊ Condom မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံရင် HIV ပိုးက ယောက်ျားရဲ့ Penis လိင်တံ၊ Foreskin ထိပ်ဖျား-အရေပြား၊ Urethra ဆီးပြွန်အဝတွေမှာ အနာအဆာ-ရှာတာ ရှိရင် ကူးနိုင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံနေတုံး သွေးနဲ့ ထိမိရင် ပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ ဆိုပါစို့ ရာသီလာနေတာ။ ဒါ့အပြင် Sexually transmitted diseases (STDs) ခေါ်တဲ့ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တခုခု ရှိနေရင် HIV ကူးစေဘို့ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျား-လိင်တံအဖျား အရေပြား ဖုံးမနေတဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းက ပိုပြီး နူးညံ့လို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပွန်းရှလွယ်တယ်။ (ဗဂျိုင်းနား)၊ စအိုဘေးက အမွှေးနဲ့ ထိမိ၊ ပွတ်မိရင်းကနေ မမြင်ရတဲ့အနာ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
လက်ခံတာ တူပေမဲ့ စအိုလမ်းကနေ လိင်ဆက်ဆံခံရတာက (ဗဂျိုင်းနား) က လိင်ဆက်ခံရတာထက် ကူးစက်ခံရ နိုင်ခြေ ပိုများတယ်။ စအိုလမ်းသုံးရင် နှစ်ယောက်သားမှာ လက်ခံသူက ပိုဆိုးဝါးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lining of the anus စအိုလမ်း အဖုံးလွှာက Vagina (ဗဂျိုင်းနား) အလွှာထက် ညံ့လို့ဘဲ။ သွေးထွက် လွယ်သေးတယ်။ သွေးဆို ပိုဆိုးရော။ လက်ခံသူက ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် စအိုလမ်းကနေ ဆက်ဆံတော့ ဆောင်ရွက်ပေးသူဟာလဲ ကူးခံရနိုင်တာပါဘဲ။ နောက်ပြီး အစာလမ်းက ပိုးတွေနဲ့ သန်ကောင်တွေလဲ စအိုလမ်းကနေ လိင်ဆက်ဆံလို့ ကူးနိုင်တယ်။ လက်ချောင်းကို (ဗဂျိုင်းနား)၊ စအို လမ်းမှာ ထည့်တာဆိုရင်လဲ အနာအဆာ ရှိရင် ကူးမှာဘဲ။ ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်တာကနေ ကူးတယ်ဆိုတာ ၂-၃ ယောက်လောက် တွေ့ဘူးထားတယ်။
Woman-to-woman Sex မိန်းမချင်းဆက်ဆံတာ နဲ့ HIV
HIV နဲ့ တခြား STDs တွေက အပြန်အလှန် သက်ရောက်နိုင်ကြတယ်။ HIV ရှိနေသူမှာ STDs ရှိနေရင် HIV ကူးစက်ဘို့ ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ STDs ရှိနေသူကိုလဲ HIV ဝင်လာဘို့ အခွင့်အလမ်း ပိုတယ်။ Syphilis ဆစ်ဖလစ် နဲ့ Herpes ရေယုံ ဆိုတာတွေက အနာတွေဖြစ်နေလို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေ အဖြူဆင်းစေတဲ့ Chlamydia ပိုး၊ ဆီးပူ-ညောင်းကျ ခေါ်တဲ့ Gonorrhea ဂနိုးရီးယားပိုးတွေက အနာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ လိင်လမ်းရဲ့ Immune response ရောဂါပြီးနိုင်စွမ်းကို တမျိုး သက်ရောက်စေတာမို့ ဖြစ်ရတယ်။
အဖြစ်များလှတဲ့ Hepatitis A အသဲရောင်-အသားဝါ A virus ပိုး ဆိုတာက ရောဂါရှိသူရဲ့ မစင်မှာ ပါနေတယ်။ HIV လိုဘဲ လိင်ဆက်ဆံတုံး ပါးစပ်သုံးရင် ကူးနိုင်တယ်။ Hepatitis B ပိုးက Sexual fluids လိင်ဆက်ဆံရင် ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့ သွေးမှာပါနေတယ်။ Hepatitis C ပိုးကတော့ သွေးမှာပါတယ်။ ပါးစပ်သုံးရင် အနာအဆာ ရှိမှသာ ကူးမယ်။ ပါးစပ်ကို သုံးတဲ့အခါ ပိုးရှိသူက လက်ခံသူ၊ ပြုလုပ်သူက ပိုကင်းသူဆိုရင် ပိုးပါတဲ့ Sexual fluid က ပိုးမရှိသေးသူရဲ့ ရာသီသွေး၊ ဒဏ်ရာ၊ ရောင်နေတဲ့ အနာထဲ ဝင်လာမှ ကူးမယ်။ ပုံမှန် ပါးစပ်-လည်ချောင်းကို ဖုံးနေတဲ့ အလွှာကတော့ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။
ပါးစပ် သုံးတဲ့အခါ ပိုးမရှိသူက လက်ခံသူ၊ ပြုလုပ်သူက ပိုးရှိသူဖြစ်အုံးတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သွားရည်ထဲမှာ ပိုးပါနေပေမဲ့ အရေအတွက် နည်းလွန်းလို့ပါ။ ပိုးရှိတဲ့ ပြုလုပ်သူရဲ့ အနာ-ဒဏ်ရာက ထွက်တဲ့ သွေးက လက်ခံသူရဲ့ လိင်လမ်း-စအိုမှာလဲ အနာအဆာရှိလို့ ဝင်မှသာ ကူးစေမယ်။ ပါးစပ်လမ်း သုံးတယ်ဆိုတာ အများအားဖြင့် ပုံမှန်လိင်လမ်းကို ဆက်ဆံနေရင်း လုပ်ကြတာများလို့ ဘယ်လမ်းကြောင့် ကူးတာလဲ သိဘို့ခက်ခဲတယ်။
၂ဝဝ၁ စပိန်သုတေသနတခုအရ HIV ပိုးမရှိတဲ့ ကျား-မ ဆက်ဆံတာသာ ဝါသနာပါသူ ယောက်ျား ၁၃၅ ယောက်ဟာ ပိုးရှိသူ အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ၁၉ဝဝဝ အကာကွယ်မဲ့ ပါးစပ်သုံးပြီး ဆက်ဆံကြတယ်။ HIV ကူးလာတာ မတွေ့ရပါ။ တောင်အာဖရိကမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် International Oral AIDS Conference မယ် တင်ပြတာက ပါးစပ်သုံး လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ကူးစက်နိုင်စွမ်း တကြိမ်ပြုတိုင်း 0.04% per contact ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။
• လိင်ဆံရာသုံး အဝတ်အစားတွေကနေ ကူးသလား။ HIV ပိုးဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအပြင် ရောက်ရင် ကြာကြာ မရှင်နိုင်ဘူး။ ဓါတ်ခွဲခမ်းမှာ စမ်းဘို့ လုပ်ရတာက ပိုးကောင်ရေ အများကြီးနဲ့ လုပ်ရတယ်။ သူတို့ကြိုက်တာမျိုး စီမံထားရင် လအထိ ထားနိုင်ပေမဲ့ ခြောက်သွေ့ သွားရင် ၉ဝ-၉၉% က နာရီပိုင်းနဲ့ သေသွားကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပိုးပါတဲ့ သွေးနဲ့ အရည်တွေဟာ ခြောက်သွေ့သွားရင် ကူးစရာလမ်း မရှိသလောက်ပါ။
• HIV-negative ဆိုတာ ဘာလဲ။ သွေးစစ်ချိန်မှာ သူ့သွေးထဲမယ် HIV antibodies မတွေ့သူဖြစ်တယ်။ HIV လုံးဝ ကင်းနေတယ်လို့တော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၆ လအတွင်း HIV ပိုးရှိသူနဲ့ အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ခဲ့ဘူးပေမဲ့ သူ့ကို မကူးခဲ့ဘူးလို့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ AIDS ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ မပြောနိုင်ပါ။
အသက် (၁၀၀) ကျော်နေဖို့အတွက်…
၀၂။ အလွန်အကျူးမစားပါနှင့်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ၀န်ပိစေပါတယ်။
၀၃။ စိတ်မရွှင်မပျဖြစ်နေရင် အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုကို စိတ်ကူးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သွားကြည့်လိုက်ပါ။
၀၄။ အရက်သောက်ရင် သင့်တင့်ရုံသာ သောက်ပါ။
၀၅။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲပြောင်းလဲနေတာကို လက်ခံပါ။လိုက်လျောစွာနေတက်ပါ။
၀၆။ ပင်စင်ယူတော့မယ်ဆိုရင် မိမိဝါသနာပါ ထက်သန်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု၇ှိပါစေ။
၀၇။ မိမိကံကြမ္မာကို မိမိထိန်းချုပ်နိုင်လေ ပိုပြီးကျန်းမာလေပါ။
၀၈။ ဆေးဝါးကိုနဲနိုင်သမျှ နည်းနည်းသာ မှီဝဲပါ။
၀၉။ နာမကျန်းဖြစ်မှာ၊ သေဆုံးမှာကို စိုးရိမ်သောက ဖြစ်မနေပါနှင့်။
၁၀။ အစားအသောက်ကို တိုးစားလိုက်၊ လျှော့စားလိုက် မလုပ်ပါနဲ့။
၁၁။ ဆေးလိပ်၊ ဆေးတံ မသောက်ပါနှင့်။
၁၂။ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ဝါသနာ တစ်ခု၇ှိနေရင် စိတ်တက်ကြွ ရှင်သန်နေပါမယ်။
၁၃။ သကြား၊ အချိုများတဲ့ အစားအသောက်ရှောင်ပါ။
၁၄။ အဆီ အစိမ့် များတဲ့ အစားအသောက်ရှောင်ပါ။
၁၅။ ထုပ်ပိုးပြုပြင်ထားသော အစားများရှောင်ပါ။
၁၆။ သစ်သီး၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစိမ်းများများစားပါ။
၁၇။ ရေတွေ အရည်တွေ များများသောက်ပါ။
၁၈။ တစ်နေ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး စားဖြစ်အောင်စားပါ။ (ငှက်ပျောသီးက ပန်းသီးထက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်)
၁၉။ တက်နိုင်သမျှ အသားစားတာလျှော့ပါ။
၂၀။ မိမိရင်ထဲ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာကို အရင်းနှီးဆုံးလူတွေထံ ရင်ဖွင့်ပါ။
၂၁။ မိမိ အချစ်ဆုံးသူကို အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ခါ ချစ်တယ် လို့ ဖွင့်ပြောပါ။
(အမုန်းတရားတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဆင်ခြင်ကင်းမဲ့သော ကမ္ဘာကြီးတွင် ချစ်မေတ္တာထားခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှု့ကို သက်သာစေပါတယ်)
၂၂။ တစ်ပတ် အနည်းဆုံး (၃) ကြိမ်လောက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း (လမ်းလျှောက်၊ ရေကူး)လုပ်ပေးပါ။
၂၃။ တစ်ပတ်မှာ နေ့တစ်ဝက်လောက် မိမိစိတ်ချမ်းသာတာကို လုပ်လိုက်ပါ။
၂၄။ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စရာစွန့်စားခန်းတစ်ခုလို သဘောထားခံစားပါ။
၂၅။ အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မကြောက်ပါနှင့်။
(အဆိုးဆုံးကို သိ၇ှိလက်ခံလိုက်တာနဲ့ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်စိတ်တွေ အတော်များများ ပျောက်ကွယ်သွားတာ အံ့သြဖွယ်တွေ့ ရမှာပါ)
၂၆။ ဘ၀ကို အလဟသ မဖြုန်းတီးပဲ မိမိ လုပ်ချင်တာတွေ အတွက်အချိန်ပေးပါ။
၂၇။ တယ်လီဖုန်းတွေက မိမိတို့ဘ၀ကို လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်နေတာ ခွင့်မပြုပါနဲ့။
၂၈။ မိမိစိတ်ကြိုက် ရေးချင်ရာ ရေးချင်ရာ ရေးနိုင်ဖို့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထားပါ။
၂၉။ စိတ်ထိခိုက် ၀မ်းနည်းဒေါသ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု့ တစ်ခုခု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖြေဖျောက်ပါ။
၃၀။ ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရလို့၊ ချစ်သူ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ညစာထွက်စားနေလို့၊ တစ်ခါတစ်ရံ အိပါရာဝင်နောက်ကျတာ ကျပါစေ။
၃၁။ နေအိမ်မှာ အလင်းရောင် အားကောင်းတဲ့ မီးလုံး၊မီးချောင်း ၇ှိပါစေ။
၃၂။ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်ပြင်းပြင်း လျှော့သောက်ပါ။
၃၃။ မိမိကိုယ်ကို မိမိနှစ်သက်သလို ၀တ်စားဆင်ယင်ပါ။
၃၄။ ညနေတိုင်း မိမိနားထင်ကို လက်ထိပ်လေးနဲ့ နှိပါပေးပါ။
၃၅။ ငြီးငွေ့ မှု့ခံစားရရင် ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပါ။
၃၆။ T.V အစီအစဉ်ကိုေ၇ွးကြည့်ပါ။အကြာကြီး မကြည့်ပါနဲ့။
၃၇။ မိမိစွမ်းအားကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့။
၃၈။ အများသုံးရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွေကို တက်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။
၃၉။ မိမိခန္ဓာကိုယ်က အချက်ပေးတာကို နားထောင်လိုက်နာပါ။(ဆရာဝန်ကိုသာ အားကိုးပုံအပ်ခြင်းမပြုပါနဲ့)
၄၀။ လေကောင်းလေသန့် များများ ရှုပေးပါ။
၀၁။ လက်ရှိ အချိန်ကာလကို ခံစားနေထိုင်တက်ပါ။
၀၂။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရယ်မောပါ။
၀၃။ မအိပ်ခင် စာကောင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်ပါ။
၀၅။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကစဉ့်ကလျား မဖြစ်ပါစေနှင့်။
၀၆။ မလိုတာတွေ မလုပ်၊ မပြော၊ လက်မခံပဲ ငြင်းတက်ပါစေ။
၀၇။ စိတ်ညစ်စရာ ပြသနာတွေကိုဖြေ၇ှင်းဖို့ စရင်းလုပ်လိုက်ပါ။
၀၈။ တစ်ချိန်မှာ တစ်မျိုးပဲ အာရုံစိုက်ပါ။
၀၉။ လေကောင်းလေသန့်ရှုပါ။ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၁၀။ မိမိချစ်သောခွေးလေးနှင့် လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။(တိရစ္ဆာန်လေးများကို ကြင်နာတက်ပါစေ)
၁၁။ ဘာသတင်းကိုမှ နားမစွင့်တဲ့နေ့၇ှိပါစေ။
၁၂။ လင်းလင်း၊ ၇ှင်းရှင်း သန့်သန့် မွှေးမွှေးနေတက်ပါ။
၁၃။ လုပ်ငန်းခွင်ကို ခေတ္တမေ့ထားတဲ့အခါရှိပါစေ။
၁၄။ တိတ်ဆိတ် အေးငြိမ်သော နေရာများသို့သွားလည်ပါ။
၁၅။ လူမှု့ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီပါ။ လုပ်အားပေးပါ။
၁၇။ စိတ်ပါ လက်ပါ လမ်းလျှောက် လှုပ်၇ှားမှု့ပြုပါ။
၁၉။ ရင်းနှီးချစ်ခင်သော ဆက်ဆံရေးသည် ရောင်ပြန်ဟပ်တက်တာ နားလည်ပါ။
၂၀။ အကောင်းမြင် မေတ္တာထားတက်ပါစေ။
အိပ်စက်ချိန် မခြွေတာသင့်သည့် အကြောင်းရင်း(၁၀)ခု
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုသူများအနေနှင့်
အိပ်ချိန်ပြည့်ပြည်၀၀ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။ အိပ်ရေးမ၀သည့်
သက်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း၊ မကြာခဏ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် အာရုံကြော
အမေရိကန်တွင် လူဦးရေ သန်း(၅၀)မှ သန်း(၇၀)ကြားအထိသည် အိပ်ရေးမ၀မှုကြောင့်
ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု
သုတေသန ပြုလုပ်မှုများအရ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းကြောင့် အဆိုးဘက်မှ ကြုံတွေ့ရသည့်
ပို၍ဝလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကဆာလောင်စေသော
ဟော်မုန်းများကို ပိုထွက်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကြိုက်နှစ်သက်သူများဖြစ်ကြပြီး ယင်းတို့မှာ အများအားဖြင့်
၃။ အိပ်ချိန်နည်းပါးမှုသည် ဆီးချိုဖြစ်နှုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျကြောင်းသိ
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပွါးနှုန်း သာမန်ထက် မြင့်မားကြောင်း သိရသည်။
(၄.၅)ဆအထိ မြင့်တက်ကြောင်း သိရသည်။
၉။ အိပ်ရေးမဝသော ကလေးများတွင် ADHDဟုခေါ်သည့် အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိ၊
၁၀။ တစ်ညတွင်(၅)နာရီအောက်သာ အိပ်သောသူများမှာ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှ
မရှိဘဲနှင့် ယျေဘူယျအားဖြင့် အသက်တိုတတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အထက်ပါ အကြောင်းပြချက်များကြောင့် လူအများအနေနှင့် အိပ်ရေးပျက်ခံ
အလုပ်လုပ်ခြင်းမျိုးကဲ့သို့ အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး
ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်လျော်မည့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ခြင်းမျိုး
ပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း ဆရာဝန်များက အတိအလင်း နှိုးဆော်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဘီပိုး အကြောင်း သကိုသိသင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
ကာကွယ်ဆေးတော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီပိုးကြောင့် ၃၀-၄၅ စက္ကန့်တိုင်း လူတယောက် သေဆုံးနေရတယ်။
ပိုးရှိနေပမဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်က ရှိနေမှန်း မသိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပိုပြီးကြီးမာတဲ့ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေရတယ်။
HBV က HIV ထက် ၁၀ ဆ ပိုပြီး အဖြစ်များနေတယ်။ HIV က အာဖရိက နဲ့ HPV က အာရှမှာ အများဆုံးဘဲ။
HIV ထက် HPV က အဆ ၁၀၀ ပိုပြီး ကူစက်နိုင်တယ်။
သေခြာဂရုစိုက် မကုသရင် ပိုးရှိနေသူထဲက ၂၅% ဟာ အသဲကင်ဆာ၊ အသဲအလုပ်မလုပ်တော့တာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်။
Hepatitis C ဆိုတာက တခြား ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကူးစက်တယ်။ သန်း ၁၈၀ မှာ ရှိနေတယ်။ ပျောက်အောင် လုပ်မရဘူး။ ကာကွယ်ဆေးလဲ မရှိသေးဘူး။
HBV နဲ့ Hepatitis C နှစ်မျိုး ပေါင်းလိုက်ရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၆ ဘီလီယံထဲက သန်းပေါင်း ၅၃၀ မှာဖြစ်နေတယ်။
Hepatitis B infection ရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကနေ သူ့ဗိုက်ထဲက ကလေးဆီကို မွေးနေတုံးမှာ ကူးစေနိုင်တယ်။
သူများတွေထက် ပိုဖြစ်လမ်းရှိသူတွေကတော့ တရားမ၀င် မူးယစ်ထိုးဆေးသုံးသူ၊ လိင်တူဆက်ဆံသူ၊ လိင်ဆက်ဆံဘက် အဖေါ်များသူ၊ ထောင်ကျနေသူ၊ ကျောက်ကပ် Haemodialysis လုပ်နေရသူ၊ Haemophiliacs ရောဂါရှိသူ၊ ဆးရုံ-ဆေးခန်းမှာ အလုပ်နေရသူများ၊ အရေပြား-ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကွင်းတပ်-တက်တူထိုး အလှဆင်သူတွေ၊ ဖြစ်တယ်။
Hepatitis B recombinant vaccine ကာကွယ်ဆေးက စိတ်ချရတယ်။ ထိရောက်ပါတယ်။ ၃ ခါထိုးပါ။
ခဲံမိရင်ဖြစ်စေ၊ အဓမ္မ ပြုခံရတဲ့ သူတွေမှာလည်း နောက်ဆက်တွဲ
မထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အတွက် စိတ်ချရအောင် သုံးရမယ်.ဆေးက
ဆိုတဲ့ဆေးတွေ ကတော့ ဈေးကွက်မှာ ပိုအလွယ်တကူရနေပါပြီ။ အဲ့ဒီမှာ
ဆေးနှစ်လုံးပါပါတယ်။ တစ်လုံးကို အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်
နီးနိုင်သမျှနီးအောင် ချက်ချင်းသောက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်လုံးကို ၁၂
နာရီကြာရင်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သောက်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဆက်ဆံပြီး ၇၂
နာရီအတွင်း သောက်နိုင်ပါတယ်။ နီးနိုင်သမျှနီးအောင် သောက်ရင်တော့
တစ်ခုသိထားရမှာ က ဒီဆေးဟာ ကိုဝန်ဖျက်ချတဲ့ဆေး
ဒီဆေးရဲ့သဘောက သားဥမကြွေအောင် တားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့၊ မတော်တဆ ကြွေပြီးသွားလို့ sperm နဲ့တွေ့ပြီး
zygote ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သူ့ကို သားအိမ်နံရံမှာ တွယ်လို့ မရအောင်
လုပ်လိုက်တာပါ။ zygote လေးဟာ သားအိမ်နံရံကိုတွယ်ပြီးမှ သန္ဓေသား
အဖြစ်ကြီးထွားခွင့်ရမှာမို့လို့ပါ။ ဒီလို မဖြစ်အောင် ဒီဆေးက
တားလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆေးကို နီးနိုင်သမျှနီးအောင်
သောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီအတွက် စိတ်ချရမှာပါ။
တစ်ခါ တစ်ရံသာ ကောင်းပါတယ်။ အမြဲစွဲသောက်တဲ့ ဆေး မဟုတ်ဘူး
သိတိပြုရမယ့်တစ်ချက်က ဆေးသောက်ပြီးလို့ ၂ နာရီအတွင်း
ပြို့အန်ပြီး ဆေးပြန်ထွက်ရင် အသစ်ပြန်သောက်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန် တားဆေး များက​ ​​ ဉာဏ်ရည်​ ထက်မြက်​စေ​နိုင် ဟု
အပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့သင်္ကေတကတော့ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားရဲ့ လိင်ကို ဆိုလိုတဲ့ လိင်သင်္ကေတအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဝိုင်းပုံနဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပုံက အမျိုးသမီးရဲ့ လိင်ကို ဖော်ပြတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး၊ စက်ဝိုင်းပုံနဲ့ မြားပုံတွဲစပ်ထားတဲ့ပုံက အမျိုးသားကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟောဒီပုံလေးကတော့ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လိင်အမှတ်အသားလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှတ်အသားလက္ခဏာကတော့ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လိင်အမှတ်အသားလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှတ်အသားလက္ခဏာကတော့ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကိုကြိုက်တဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သင်္ကေတလို့ တချို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် (အသုံးပြုတာနည်းပါတယ်)
ဒီအမှတ်အသားကတော့ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကိုချစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားပြုလေ့ရှိတဲ့ သင်္ကေတလို့ တချို့ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Oestrogen သို့မဟုတ် Progesterone အမည်ရှိ သန္ဓေမရရန် ဟန့်တားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် အာရုံကြောများကိုလည်း သက်ရောက်လှုံ့ဆော်လေ့ရှိပြီး ယင်းက ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးကြောင်း Dr Belinda Pletzerက ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
လိင်အကြောင်းပြောရမည်ဆိုလျင် သဘာဝဖြစ်စဉ်အဖြစ်လက်မခံနိုင်ပဲ ရှက်ရွံ့စရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်သာ လက်ခံကြသည်၊ သို့သော် ပုထုဇဉ်လူသားများသည် ထိုအရာကိုရှောင်လွဲနိုင်သည့်လူဦးရေနှုန်းအလွန်နည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူငယ်များမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနည်းလမ်းများ၊ အသုံးပြုသော ပစ္စည်းပစ္စယများကို အသုံးပြုရမှန်းမသိပဲ မိမိတို့အတွက် ကာကွယ်မှုမပါပဲ ဆက်ဆံမိသောအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်ကြီးနေသော အိပ်စ်အိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်ရောဂါများ အမှတ်မထင်ကူးစက် မှုများရှိလာသည်။
ဝစ်လစ်စား​​လစ် ဓာတ်ပုံများ​​ကို ကြည့်​​ရှုခြင်း​​သည်
မိန်း​​က​​လေး​​များ​​၏ ဝစ်လစ်စား​​လစ် ဓာတ်ပုံများ​​ကို ကြည့်​​ရှုခြင်း​​သည် ဦး​​​နှောက်၏ စွမ်း​​​ဆောင်ရည်များ​​ကို တိုး​​မြှင့်​​​ပေး​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။
သု​​တေသီများ​​က Page 3မှ လှပ​​သော Lacey, Keeley and Rhian တို့​​ကဲ့​​သို့​​ ​​မော်ဒယ်မိန်း​​က​​လေး​​များ​​၏ အဝတ်ဗလာ ဓာတ်ပုံများ​​ကို ပြသပြီး​​ စမ်း​​သပ်ချက်အရ ဦး​​​နှောက်၏ စွမ်း​​​ဆောင်ရည်ကို လှုံ့​​​ဆော်​​ပေါ်နိုင်​​ကြောင်း​​ ​​ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံ တမ်ပီရီ တက္ကသိုလ်မှ ပ​​ရော်ဖက်ဆာ Jari Hietanen က “ကျွန်​​တော်တို့​​ရဲ့​​ အချက်အလက်​​တွေက အမြင်အာရုံရဲ့​​ နှိုး​​ဆွမှုဟာ ဦး​​​နှောက်ကို သက်​​ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပထမဆုံး​​အကြိမ် လက်​​တွေ့​​ပြနိုင်ခဲ့​​ပါတယ်။ အထူး​​သဖြင့်​​ လိင်နဲ့​​ဆိုင်တဲ့​​ လှုံ့​​​ဆော်မှုဟာ ဦး​​​နှောက်ရဲ့​​ တွက်ချက်မှု မြန်နှုန်း​​ကို သိသိသာသာ ဆက်စပ်သွား​​တယ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့​​ပါပြီ”ဟု ​​ပြောကြား​​သွား​​ခဲ့​​သည်။
လိင်ဆက်ဆံ မှု မှာ ပါးစပ် နဲ့လုပ်တာ ကို ရှောင်ကျဉ် ဖို့အိုဟိုင်းယို
ပဲ သူက နှစ်သိမ့်မှု ပေး ခဲ့ ရတယ်။ သူ ဟာ အခု တော့ သိပ်မစိုးရ သေးတဲ့ ခံတွင်း ကင်ဆာ
ဆေးနှင့် တွဲဖက် မစားသုံးသင့်သော အစာမျာ&a
စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်က ကိုယ်သောက်တဲ့ ဆေးပေါ်ကို နည်း ၃ မျိုးနှင့် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
1. အချို့အစားအသောက်က အစာလမ်းကြောင်းက ဆေးစုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးအာနိသင် လျော့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
2. အချို့အစားအသောက်က ဆေးကို ကိုယ်ခန္ဓာက ချေဖျက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဆေးသောက်ပေမဲ့ ဆေးအာနိသင် ပိုများတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
3. အချို့အစားအသောက်ကတော့ တခြားဆေးတစ်ခုခုရဲ့ အာနိသင်နဲ့ သွားတူနေတတ်ပါတယ်။
1. Grape-fruit juice increase amount of drugs your body absorbed
Grape fruit juice က ဆေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာက ချေဖျက်တာကို နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ Cholesterol ကျဖို့ သောက်တဲ့ဆေး၊ နှလုံးရောဂါအတွက်ဆေး၊ immune system နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးတွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်ချေဖျက်တာကို နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် juice သောက်တဲ့ ပမာဏကို မူတည်ပြီး ပုံမှန် ဆေးသောက်ပေမဲ့ ဆေးအာနိသင် နဂိုရှိသင့်တဲ့ ပမာဏထက် 2-3 ဆ ထိတောင် သွေးထဲမှာ ပိုများနေတတ်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏများလေလေ ဆေးရဲ့ ကောင်းတဲ့အာနိသင်ထက် ဆိုးကျိုးအာနိသင်က ပိုများဖို့ များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Grape fruit juice နဲ့ ဆေး တွဲမသောက်သင့်ပါ။
2. Acidic Juices should not be taken together with certain Antibiotics
Orange juice, Tomato juice စတဲ့ Citrus juices အမျိုးအစားတွေကတော့ antibiotics လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာက စုပ်ယူတဲ့နေရာမှာ နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Orange Juice နဲ့ ပိုးသတ်ဆေးများနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါ။
3. Vitamin K rich foods contribute to blood clotting. Vit K rich foods should be limited when taking blood thinners
အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ကညွန့်၊…) စတာတွေမှာ Vitamin K ဓာတ်အများကြီးပါပါတယ်။ Vitamin K ဟာ Blood clotting လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ Vit K များတာက သွေးကြဲဆေးသောက်နေတဲ့ သူများအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
4. Dairy products block iron absorption
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကတော့ သံဓာတ် စုပ်ယူမှုကို နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ သံဓာတ်အားဆေး သောက်နေရသူတွေ၊ သံဓာတ်ချို့တဲ့ သွေးအားနည်းသူတွေ အတွက် နို့နဲ့နို့ထွက် ပစ္စည်းများ သောက်ရာမှာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
Fibers တွေကတော့ stomach emptying အချိန်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး ဆေးတွေ စုပ်ယူမှုကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးတိုင်းနဲ့ Fibers တွဲမစားနဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးဆေး Digitalis, Penicillin စတဲ့ဆေးအချို့နဲ့တော့ တွဲဖက် မစားသုံးသင့်ပါဘူး။
Coffee, Cola စတဲ့ ကာဖင်းပါတဲ့ အစားအသောက်တွေက ပန်းနာရင်ကျပ်ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်နဲ့ သွားတူပါတယ်။ ဒါကြောင့် asthma ဆေးတွေ ဖြစ်တဲ့ theophylline စတာတွေ သောက်နေရင် caffeine မသောက်သင့်ပါဘူး။ နောက် ကာဖင်းဓာတ်က လူကို နိုးကြားစေတဲ့အတွက် သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးနဲ့ တွဲမသုံးသင့်ပါဘူး။
7. Alcohol & wine
Wine နဲ့ cheese တွဲသောက်ခြင်းက စိတ်ဓာတ်ကျရာမှာ သုံးတဲ့ Anti-depressant ဆေးရဲ့ မကောင်းတဲ့ အာနိသင်ကို ပိုဆိုးပြီး အသက်အန္တာရယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ MAO Inhibitor လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက် အရက် က အသည်းကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ဆေးအများစုက အသည်းမှာ ချေဖျက်၊ ပြုပြင်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရက်သောက်တာနဲ့ ဆေးအာနိသင်ကို ပြောင်းလဲစေတာ ပတ်သတ်မှု ရှိပါတယ်။
ရေကတော့ ဘာအာနိသင်မှ မပြောင်းစေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အစာနဲ့ ဘယ်ဆေးတွဲမသောက်သင့်ဘူး သံသယရှိလို့က ရေနဲ့သာ တွဲသောက်ပါ။ ရေနဲ့ ဆေးကို သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ လိမ္မော်ရေ၊ စပျစ်ဖျော်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်တို့နဲ့ တွဲသောက်တာထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆေးအာနိသင်ကိုလဲ​ မနှောင့်ယှက်ပါဘူး။
၁၊ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်မျှ ပြုကျင့်ရုံနဲ့ ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုကောင်းစေနိုင်ပါသည်၊
၂၊နာကျင်ကိုက်ခဲမှုသက်သာစေခြင်း၊ အနားယူခြင်းကဒူး၊ ပခုံး၊ ကျောနဲ့လည်ကုပ်တို့ကို နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါက မလုပ်သူတွေထက်ကြွက်သားနာကျင်မှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေကိုပျော့ပျောင်း စေနိုင်သလို နာကျင်မှုတွေကိုလည်း လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ကို ပိုတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေးလာတတ်သလို အလုပ်ပိုပြီးပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန် လုပ်ခြင်းဖြင့် ခန္ဒာကိုယ် ပိုမိုလှပကြော့ရှင်း စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှပချင်ရင်တော့ နေ့တိုင်းမိနစ် ၂၀ ခန့်လမ်းလျှောက်ပေးပါ။
သွးတိုက်ခြင်းကတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်တော့ပါ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးဖြစ်တတ် လာတဲ့ သွားဖုံးရောင်ရောဂါ ( periodontitis ) ဖြစ်နိုင်ချေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက လျော့ချပေးနိုင်ကြောင်ါ် လေ့လာချက်တွေအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။ သွေးထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ c-reactive protein ပမာဏကိုလျှော့ချ ပေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းက ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းကို မြန်စေရုံမျှမက ကိုယ်ခံအားကိုလည်းကောင်းစေတာကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းက အိပ်ကောင်းခြင်းနဲ့ လည်းအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ညညအိပ်မပျော်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ ညနေးပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်ခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းကိုမနှောက်ယှက်သည့်အပြင် ပိုပြီးတော့တောင်အိပ်ပျော် စေပါတယ်။
ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်နေပါက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပေးပါ။ လေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ရင်ချောင်လာစေပါမယ်။ လေပွသက်သာတဲ့အထိလမ်းလျှောက်ပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက နှလုံးအတွက်ကောင်းစေသလို မျက်လုံးအတွက်လည်းကောင်းစေပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိမှုန်ရောဂါတစ်မျိုး ( macular degeneration ) ဖြစ်နိုင်ချေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက် ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ norepinephrine နဲ့ dopamine ဟော်မုန်းဓာတ်တွေကိုလျော့ကျစေနိုင်ပြီး စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေနိုင်တဲ့ serotonin ဟော်မုန်းတွေကိုများစေပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်စေခြင်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းခြင်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ပိုင် “တူ” ကို အသုံးပြုခြင်းက